युएनविसी सेमिफाइनलमा – Rajmarg Online
घोराही २ वैशाख । घोराहीमा चैत २३ गतेदेखि वैशाख ७ गतेसम्म हुने शरण सम्झना कप अन्तर्गत सोमबार भएको खेलमा युएनविसी सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । घोराहीको भरतपुर खेल मैदानमा भएको फुटबल खेलमा युएनविसीले नवलपुर युथ क्लबलाई ० को बिरुद्द ७ गोल गरेको छ । युएनबिसीले नवलपुर युथ क्लब माथि शानदार जित हासिल गरेको छ | उत्साहजनक भएको खेलमा युएनबिसीका खेलाडीले राम्रो खेल प्रदर्शन गर्दै नवलपुर युथ क्लबलाई पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ |
प्रतिष्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफमा युएनविसीले १ गोल गरेको थियो भने दोश्रो हाफमा लगातार ६ गोल गरेको थियो । चैत २९ गते भएको खेलमा युएनविसी र सक्सेस क्लबका बीच १/१ गर्दै खेल बराबरीमा टुंगिएको थियो । युएनविसीका जर्सी न.१४ का खेलाडी लेमन सागर डिसीले २ गोल,जर्सी न. १० का खेलाडी आकाश बुढाले २ गोल, जर्सी न. १३ का खेलाडी मोहन थापाले २ गोल र जर्सी न. ११ का खेलाडी खिम घर्तीले १ गोल गरी जम्मा-जम्मी ७ गोल गरेका थिए ।
साथै नवलपुर युथ क्लबको तर्फबाट कुनै गोल हुन सकेन । त्यसैगरी वैशाख ४ गते हुने सेमीफानल खेलमा युएनविसी र बडहरा क्लब भिड्ने छन । भरतपुरको खेल मैदानमा बुधबार दिउँस ४ बजे उक्त खेल हुने छ । शरण स्मृतिकप अन्तर्गत मंगलबार न्यु स्टार फुटबल एकेडमी नारायणपुर र रतनपुर ११ का बीच प्रतिष्पर्धा हुने आयोजक राप्ती क्लबका अध्यक्ष बसन्त पुरीले बताउनु भयो । खेलको विस्तृत जानकारी फोर्थ अफिसियलका दीपक पुन र आयोजक सदस्य सन्देश श्रेष्ठले दिनु भएको थियो ।
राप्ती क्लबको आयोजनमा भैरहेको फुटबल प्रतियोगितामा दाङ्ग जिल्लाका १२ वटा क्लब सहभागी रहेका छन। आयोजकले यस फुटबल प्रतियोगितामा १२ वटा टिमलाई पत्र पठाई आमन्त्रित गरेको थियो भने शरण थापा स्मृति फुटबल कप लिगसंगै नक आउट रहेको छ।
फुटबल प्रतियोगितामा प्रथम हुने क्लबलाई रु.५५ हजार ५ सय ५५ रहेको छ भने दोश्रो हुने क्लबलाई रु.२५ हजार ५ सय ५५ रहेको छ ।